Nahoana No Asehon’ny Faritanin’i Bamyan Ny Tsara Indrindra Any Afganistàna ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2018 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Ελληνικά, Esperanto , Italiano, English
Seho tamin'ny Fetiben'ny Dambura tany amin'ny faritanin'i Bamyan. Ny sary rehetra dia avy amin'i Zaker Mandegar (nahazoana alàlana)
Mety ho malaza any ivelan'ny firenena ny faritra Bamyan any afovoan'i Afganistàna noho ilay heloka bevava nampihoron-koditra nampiharina tamin'ny lova ara-kolontsaina, fa nandritra ny 17 taona dia vitsy ireo faritra any Afganistàna no manao hetsika bebe kokoa hitandrovana ny kolontsaina.
Tamin'ny 2001, nopotehin'ny talibana ilay sary sokitr'i Bouddah iray ngezabe tany Bamyan, faritra iray malaza amin'ireo hainifahagolany (arkeolojia) samihafa, ireo farihy manjelanjelatra, ireo lohasaha maitso midadasika mahafinaritra.
Raha azo atao ny manangona tamberim-pihetsika amin'ny fahaverezana kolontsaina mahatsiravina tahaka ireny, dia ny Fetiben'ny Dambura maharitra dimy andro, izay lasa fihaonana mahazatra ao amin'ny faritra, no mety ho mifanaraka izany.
Tamin'ity taona ity, natao tamin'ny 29 jona tao ambany lanitra manga madio ny andiany faharoa tamin'ilay fetibe, mpijery an'arivony manerana ny firenena, hankalaza ny fitaitaika mampatorin'ilay zavamaneno tena ankafizin'ny firenena no noraisiny.
Ireo sary miloko farany tamin'ny fetiben'ny #Dambura tany #Bamiyan. Bamiyan no renivohitry ny loko, tantara, zavakanto, kolontsaina, fitiavana, mozika sy ny fitoviana aty #Afghanistan. Izany no nahatonga an'i #Buddha nipetraka teto Bamyan an-taonany maro. Ary izany no sary tokony hahitan'izao tontolo izao an'i Afganistàna
Vita tamin'ny hazonà voaroihazo ny karazana gitara dambura. Any amin'ny faritra avaratra sy afovoany amin'ny firenena no tena milalao azy.
Na izany aza, mihoatra lavitra noho ny hira iarahana miredona ny Fetiben'ny Dambura.
Ny fampiroboroboana ny mozika nenti-paharazana, fampidirana ny asa-tànana nentim-paharazana, fanamafisana ny fizahantany ary fankalazàna ny kolontsaina no tanjony. Raha toa ka fahazarana ny hetsika tahaka izany any amin'ireo firenena maro, aty Afganistàna kosa dia tena misy dikany hafa mihitsy, satria tsy mora ny mijoro indray mandeha, raha tsy lazaina ny indroa misesy.
Tsy dia nahalala ady loatra tahaka ireo faritany maro any Afganistàna i Bamyan, midika izany fa tsy fahasahiranana loatra ho an'ireo mpikarakara ny resaka fiarovana. Taona vitsy lasa izay, dia nampiantrano fetibe hafa ilay lohasaha arovan'i Hindu Kush sy ny tandavan-tendrombohitra Koh-i-Baba, isan'ireny ny Fetiben'ny Silk Road sy ny Gul-e Kachalo (fetiben'ny vonin'ny ovy)
Nokianin'ny Filànkevitry ny Ulema-n'i Bamyan, izay nilaza azy io ho Haram ( tsy araka ny lalàna) mafy tokoa ireo mpikarakara tamin'ny taona lasa, tamin'ny nanomezany fomba fijery henjana momba ny mozika sy ny dihy naparitaky ny talibàna nandritra ny nanjakan'ilay vondrona nanomboka tamin'ny 1996 ka hatramin'ny 2001. Na izany aza nisy ihany ny fampisehoana.
Tonga maro ireo mpanakanto avy any amin'ny faritra hafa — Ghazni, Ghor sy Daikundi ary ny renivohitra Kabul. Ny masoivohon'i Shina any Afganistàna, ny UNESCO ary ny governemantan'ny faritra no nanohana ilay fetibe.
Ny fisandratan'ireo vehivavy any an-toerana no fanamby iray ho an'ny mpitahiry ny nentim-paharazana ara-tsosialy noforonina tamin'io fetibe io. Vondrona vehivavy no nanantontosa ny efatra tamin'ireo fampisehoana 11. Na betsaka aza ireo nankasitraka ny fandraisan-dry zareo anjara, dia nisy ny tena tsy tia mainty. “Mpivaro-tena” izay manaparitaka fahsha (fijangajangana) sy mampiroborobo ny fisainana tandrefana no niantsoana ireo vehivavy mpandihy sy mpihira ireo tao amin'ny Facebook.
Nibitsika i Mohammad Yasin Samim :
Manome hafatra mazava ho antsika ireo sary ireo : fiarovana, fahamendrahana ary fitovian'ny lahy sy ny vavy. Maniry ny hisian'ny fivoriana tahaka izao any amin'ny faritany rehetra aho. Ilaina amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batan'ny firenena ny mozika, ny hetsika ara-kolontsaina sy ny hetsika am-pilaminana. #DanboraFestival ao amin'ny #Bamyian pic.twitter.com/JkNqglwNVs
Ny ady an-taonany maro no nanamarika ny fiainana ara-javakanto sy ara-kolontsaina afgàna. Sarwar Sarkhosh, olo-malazan'ny dambura, dia tao anatin'ireo olona maro maty tamin'ny taona 1980. Maripankasitrahana an'i Sarkhosh noho ny kantony sy ny sorona nataony hampiroboroboana ny mozika aty Afganistàna, indrindra ny mozika nentim-paharazana Hazaragi ny fetiben'ny volana jona.
Raha tsinian'ny mponina ao Bamyan ho tsy miraharaha ny faritra misy azy ireo amin'ny resaka fotodrafitrasa sy sampan-draharaham-panjakana ny governemanta, ny fizahantany kosa dia nanao izany ho andry iankinan'ny toekarena noho ny asan'ireo fikambanana toy ny Foibe ara-kolontsainan'i Bamyan sy ny fandaharanasan'ny fizahatany manaja ny tontolo iainana (zahavoary) aty Bamyan. Taona iray hafa ny fetibe.
Na vitsy aza ny isan'ireo mpizahatany mitsidika ilay faritra isantaona, dia ireo afgàna avy any amin'ny faritany hafa indrindra no miatrika ireo làlana ratsy mankany Bamyan.
“Tiako raha Bamyan daholo ny faritany rehetra ary bamyani avokoa ny mponina rehetra,” hoy i Ahmad Kakar, mponina iray ao Jalalabad izay nanatrika ilay fetibe tamin'ity taona ity, tamin'ny Global Voices.